USTAN LEE AKAZUKUVELA KWIIGCINA ZEGALAXY - UMPHATHI WASEMELIKA
Incedisa Ubutshantliziyo Be-Hiv
Ixesha Lokuzonwabisa Kumazwe Akude
UStan Lee akazukufumana abagcini beGalaxy Cameo kwaye nasi isizathu
Ewe kuyinyani: UStan Lee usandula ukuveza ukuba akazukuvela Abagcini beGalaxy nangayiphi na indlela. Kodwa kulungile, siyafunga! Umhlaba awupheli. Ufumene inkcazo efanelekileyo yokuba kutheni engayi kubakho.
Xa ubuzwa kudliwanondlebe kunye neDweebcast nokuba uza kuvela kwifilimu ezayo, uStan wathi ngekhe kuba ngoba yayiliqela elinye angazange alidale.
Khange ndibhale Abagcini beGlass, uqhubeke. Andiqinisekanga nokuba bangobani bonke. Andikwazi ukulinda ukubona i-movie. Owu, injalo ke, uStan? Ungazi njani ngokoqobo yonke into malunga noMmangaliso? Ngaba ubungumgunyathi wobuxoki ngalo lonke elixesha, uStan?
Kulungile, siza kuyeka. Siyadlala, kunjalo (enyanisweni, luhlobo oluhlaziyayo lokwazi ukuba nkqu noStan Lee akazazi zonke ii-ins kunye nokuphuma kwincwadi ebanzi yamahlaya) Kodwa ayiloxesha lokuqala uStan engenalo Uvele kumdlalo bhanyabhanya oMangalisayo - eyokuqala Marvel- ivelisiwe Nye. Kucingelwa ukuba igatya kwisivumelwano sakhe ligunyazisa ukuba anikwe indawo encinci nakweyiphi na ifilimu malunga nomlinganiswa amncedileyo ukuyila, nangona engavumi ukubonakala X-Men: kwiklasi yokuqala kwaye Iintsuku zeXesha elidlulileyo ngenxa yenkqubela phambili enxulumene nengqungquthela . Ke xa besenza iifilimu malunga nabalinganiswa uStan ebengabandakanyekanga, uhlala engaziva ekhululekile kuzo.
Ukuza kuthi ga ngoku, uStan Lee ubonakale kuzo zonke Hulk Iifilimu, ii Izigcawu zesigcawu ( Zombini ziqhelekileyo kwaye Kuyamangalisa) Thor s, i Izixhobo zentsimbi , Iimpawu ezine , X-Men, X-Men: Ukuma kokugqibela , UDaredevil, kwaye UCaptain Melika. Ngokwahlukileyo, watsiba waphuma Umbane , X2, yonke i Ukohlwaya iifilimu, zonke iifayile ze- umkhweli osisisporho Iifilimu, ii Umtya ii-sequels, kunye nazo zonke iifilimu ezikhethekileyo zeWolverine.
scooby doo daphne ukutyeba kobunzima
Ewe unokuphikisa ukuba uStan Lee akazange ayenze ngokwenyani iCaptain America, kwaye uya kuba ulungile kuba akazange - uJack Kirby noJoe Simon benjenjalo. Kodwa wayeyinto ebaluleke kakhulu ekubuyiseni umlinganiswa kwiminyaka yama-60s ngokusebenzisa iqhinga lakudala lokuhambahamba nge-cap-sicle, kwaye naye uyindoda yomkhosi ngokwakhe, ke asizukumbek 'ityala ngokufumana indima yokuthetha UMphindezeli Wokuqala .
Ukuba siza kufumana ngokwenene Kwezobuchwephesha, uStan Lee uncedile ekwenzeni iGroot, ilungu labaGcini abazakuvela kwifilimu. Kodwa ukuba uStan uziva engakhululekanga ukuzifaka ngaphakathi, kulungile, umnyele, ke kuye. Asinakukwazi ncam ukuba singambeka njani kwifilimu, sijonga ukuba uninzi lwayo lwenzeka kwisithuba esingaphandle esigcwalisiweyo. Mhlawumbi ukuba utshintshe ingqondo, banokumkhuphela ngaphezulu komthunzi oqaqambileyo wombala oluhlaza okwesibhakabhaka, mhlawumbi?
(nge io9 , umfanekiso wokuqala nge UGage Skidmore )
Ukutyelela i-Electro Times Square koku I-Spider-Man emangalisayo 2 ukukhuthaza
UStan Lee wenze iakhawunti ye-YouTube ukuthumela nje iminqweno emihle kwixhoba lokudubula
I-X-Men ngenene kufanele ukuba igxothe ii-Cyclops kwakamsinya kunale
billy eichner masiye kubathandana nabanye
izinto zokudlala r thina star iimfazwe yorhwebo
Ukuhamba utolo olufileyo ngamehlo
Intombazana eneminyaka eli-13 ubudala ibhentshi cinezela
Umfazi omangalisayo imiba engama-52
tracee ellis ross utshatile